कस्तो रहला तपाइँको आजको दिन, हेर्नुहोस् आज चैत्र २८ गते बिहीबारको राशिफल ! - PUBLICAAWAJ
कस्तो रहला तपाइँको आजको दिन, हेर्नुहोस् आज चैत्र २८ गते बिहीबारको राशिफल !
प्रकाशित : बुधबार, चैत २७, २०७५१७:४३ पब्लिक आवाज / संवाददाता , अम्बिका
नयाँ कार्य गर्न सक्नु हुनेछ । यद्यपी तपाइँको विचारमा स्थिरताको अभाव रहँदा केहि मामलामा उल्झनको अनुभव गर्नु हुनेछ । नोकरी या व्यवसायमा स्पर्धात्मक वातावरण रहनेछ । लघु यात्राको संयोग पर्नेछ । भाइ-बन्धुको साथ मेल-जोल बन्नेछ । त्यसबाट लाभ हुनेछ । स्त्रीले वाणीमा नियन्त्रण राख्नु पर्नेछ ।
आज नयाँ कार्यको आरम्भ गर्न उचित हुँदैन । बातचितमा तपाइँको संकी व्यवहारले अफ्ठ्यारो स्थिति बनाउन सक्दछ । आर्थिक लाभ हुनेछ । विद्यार्थीको लागे राम्रो समय छ ।
आजको दिन स्फुर्तीले परिपूर्ण रहनेछ । उत्तम भोजन, सुन्दर वास्त्रालान्कार र मित्र, स्वजनको साथ तपाइँको दिन आनन्दमा व्यतित हुनेछ । दाम्पत्य जिवनमा सुख सन्तोषको अनुभव हुनेछ । आर्थिक लाभ र आयोजनाको लागी अनुकुल दिन छ । अधिक खर्च हुनेछ । खर्चमा संयम राख्नु पर्नेछ । नकारात्मक विचारबाट टाढा रहनु होला ।
परिवारमा मनमुटाव हुनेछ । मानसिक अस्थिरता रहनेछ । मनमा द्विविधाको अनुभव हुनेछ । महत्वपूर्ण निर्णय स्थगित गर्नु नै लाभदायक रहनेछ । कसैको साथ वादविवादको संभावना रहेको छ । स्वास्थ्य सम्बन्धी लापरवाहीले स्वास्थ्यमा खराबी ल्याउन सक्छ । कोर्टको मामलामा सम्हालिएअर रहनु होला । मानहानी र धन हानीको संभावना रहेको छ ।
आजको दिन तपाइँको लागी लाभदायक साबित हुनेछ । यद्यपी मनको अस्थिरताको कारण हातमा आएको अवसर फुत्कनेछ । स्त्री मित्रबाट लाभ हुनेछ । घरमा मांगलिक कार्य हुनेछ । व्यापारीहरुको व्यापारमा वृद्धि हुनेछ । नोकरी पेशा गर्नेहरुको आयमा वृद्धि हुनेछ । बाहिर जाने आयोजना हुनेछ ।
नयाँ कार्यको शुरुवात गर्नको लागी मनमा बनेको योजना सकार हुनेछन् । पिताको साथ आत्मियता बढ्नेछ । साथै पिताबाट लाभ पनि हुनेछ । व्यापारी र नोकरी गर्नेहरुको आ-आफ्नो क्षेत्रमा आघि बढ्ने योग छ । धन र मान-सम्मानमा वृद्धि हुनेछ । सरकारको तर्फबाट लाभ हुनेछ । स्वास्थ्य राम्रो रहनेछ । गृहस्थी जिवनमा सुख शान्ती र सम्वादिता रहनेछ । असुली या व्यापारको कामले बाहिर जानु पर्नेछ ।
ज्ञान, गोष्टिमा समय व्यतित हुनेछ । नयाँ कार्यको आरम्भ गर्न सक्नु हुनेछ । लामो दुरीको यात्रा या तिर्थ भ्रमणको योग छ । विदेशगमनका अवसर निर्मित हुनेछन् । स्वास्थ्य मध्यम रहनेछ । सन्तानको समस्याले चिन्ता उत्पन्न हुनेछ ।
वाणी र व्यवहारमा संयम राख्नु आवश्यक छ । दैनिक कार्यको अतिरिक्त नयाँ कार्य अपनाउनु राम्रो हुनेछ । बिमारी पर्ने योग छ । खान-पानमा विशेष ध्यान राख्नु होला । अचानक धन लाभ हुनेछ । आध्यात्मिक साधनाको लागी राम्रो समय छ । चिन्तन-मननमा समय व्यतित गर्दा मानसिक शान्ति पाउनु हुनेछ ।
पार्टी, पिकनिक, प्रवास, सुन्दर भोजन र वस्त्र परिधान आजको दिनको विशेषता रहनेछन् । मनोरंजनको दुनियाँमा सयर गर्न पाउनु हुनेछ । विपरित लिंगीय व्यक्तिको साथ भेटघाट रोमाञ्चक रहनेछ । दाम्पत्य जिवनमा उत्तम सुख प्राप्ती हुनेछ । सार्वजनिक सम्मान र ख्याती प्राप्त हुनेछ । बौद्धिक, तार्किक विचार- विनिमय हुनेछ । भागीदारीमा लाभ हुनेछ ।
व्यापार धन्दाको विकास र आर्थिक योजनाको लागी अनुकुल दिन छ । असुली र पैशाको लेन-देनमा सफलता मिल्नेछ । आयात- निर्यातका व्यापारीलाई लाभ हुनेछ । परिवारमा हर्षोल्लासको वातावरण रहनेछ । आर्थिक लाभ हुनेछ । कानुनी उल्झनमा सचेत रहनु होला । स्वास्थ्य राम्रो रहनेछ । विरोधीको चाल निष्फल रहनेछ ।
मानसिक अशान्ती र निराशताको दिन रहनेछ । तुरुन्तै बदल्ने विचारको कारण अनिर्णायकता रहनेछ । ठोस निर्णय लिन सक्नु हुने छैन । सन्तानको प्रश्नले उल्झनमा राख्नेछ । पेटको समस्याले सताउनेछ । कार्य निष्फलताले निराशता छाउनेछ । आकस्मिक धन खर्च हुनेछ । साहित्य लेखनको लागी अनुकुल दिन छ ।
आजको दिन सावधानी अपनाउनु पर्नेछ । पारिवारिक सदस्यको साथ मतभेद हुनेछ । माताको स्वास्थ्य चिन्ताको कारण बन्नेछ । स्वास्थ्य खराब हुने सम्भावना छ । मानसिक चिन्ता रहनेछ । धन र मान हानीको योग छ । नोकरीमा समस्या आउनेछ । स्त्रीको साथ सम्बन्ध हानिकारक साबित हुनेछ ।